လူစွန့်​စားမြင့်​​ကျော်​နှင့်​ ​ပြခန်း(၉)မှ​ပျောက်​ဆုံး​နေ​သော ကဗျာဆရာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူစွန့်​စားမြင့်​​ကျော်​နှင့်​ ​ပြခန်း(၉)မှ​ပျောက်​ဆုံး​နေ​သော ကဗျာဆရာများ
လူစွန့်​စားမြင့်​​ကျော်​နှင့်​ ​ပြခန်း(၉)မှ​ပျောက်​ဆုံး​နေ​သော ကဗျာဆရာများ
Posted by ရာမည on Sep 22, 2013 in Creative Writing | 13 comments
တစ်​ခု​သောမိုးရာသီ၏ စိုထိုင်းထိုင်း​နေ့တစ်ေ​န့၌ ……
ကျွနု​ပ်​ စာ​ပေဖတ်​ရှု​ရေးသားရာ​နေရာဖြစ်​​သော ဂဇက်​ရွာတွင်​ ကဗျာဆရာများနှင့်​ ထိုသူတို့၏ ကဗျာများကို
အ​တွေးအ​ခေါ်ညံ့လှ​သောကျွနု​ပ်​မှာ ထိုသို့​သောကိစ္စများတွင်​ စဉ်းစားနိုင်​စွမ်းမရှိသည်​ဖြစ်​၍
မိတ်​​ဆွေကြီးဖြစ်​သူ လူစွန့်​စားမြင့်​​ကျော်​ထံသို့ အပူကပ်​ရ​လေ​တော့သည်​ ။
ကိုမြင့်​​ကျော်​မှာ စမ်း​ချောင်းတွင်​​နေထိုင်​သည်​ဖြစ်​ရာ ၄င်းနှင့်​နီး​သော ​မြေနီကုန်းရှိ​လောကနတ်​ လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​တွင်​ ချိန်းဆိုခဲ့ရ​လေ​၏။
“​ပြောပါဦး အိုင်​အိုကြီးရဲ့ … ဘာများအ​ရေးတကြီးဖြစ်​လာလို့လဲဗျ ..အခုတ​လော အမှုအခင်း​တွေလည်း မကြားပါဘူး “
ကိုမြင့်​​ကျော်​မှာ ခရီး​ရောက်​မဆိုက်​ ခုံတစ်​လုံးဆွဲထိုင်​ရင်း​မေးလိုက်​​လေရာ ..
“ အမှု​တော့ မဟုတ်​ပါဘူး ကိုမြင့်​​ကျော်​ရယ်​ … ကျုပ်​စာ​တွေဝင်​ဖတ်​​နေတဲ့ မန်းတ​လေးဂဇက်​က ကဗျာပြခန်းကိစ္စပါဗျာ ..“
“ အင်း…. ဆက်​ပါဦးဗျ “
“ ဒီလိုဗျာ … ကဗျာပြခန်းက ကဗျာဆရာ​တွေနဲ့ သူတို့​ရေးတဲ့ကဗျာ​တွေကို တွဲဆက်​​ပေးရမယ်​တဲ့ … အများဆုံးမှန်​တဲ့သူကိုဆု​ပေးမယ်​​ပေါ့ဗျာ …. ကျုပ်​က ကိုယ့်​အရည်​အချင်းကိုယ်​သိလို့ မ​ဖြေရဲဘဲ ​ရှောင်​​နေတာ ..အဲ့ဒါကို လုံမ​လေးနဲ့ အစ်​မကြီး မမ တို့က ဆွဲသွင်းတယ်​​လေဗျာ …ဒါ​ကြောင့်​ ခင်​ဗျားကို အပူကပ်​ရတာဘဲဗျိုး ..ဟားဟား ဟား …“`
“ဖြစ်​ရ​လေအိုင်​အိုရယ်​ … ကျုပ်​ဖြင့်​ စိတ်​ပူသွားတာပဲ … .. စိတ်​​အေး​အေး ထားပါအိုင်​အိုကြီး​ရေ .. ခင်​ဗျားဖုန်းနဲ့ အဲ့ ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​ခေါ်လိုက်​ ကျုပ်​ တစ်​ထိုင်​တည်း​ဖြေ​ပေးမယ်​ဗျာ “
“ ​အောင်​မ​လေး ​ကျေးဇူးကြီးပါ​ပေ့ကိုမြင့်​​ကျော်​ရယ်​ … ​နေ့လည်​စာကို ​ရွှေမြို့​တော်​ချစ်​တီးထမင်းဆိုင်​မှာ​ကျွေးပါ့မယ်​ဗျား …“
ဤသို့ဖြင့်​ …. ကျွနု​ပ်​လည်း ကိုမြင့်​​ကျော်​​ပြော​သောအချက်​အလက်​မျာကို မှတ်​သားရ​လေ​တော့သည်​ ။
ကိုမြင့်​​ကျော်​၏​တွေး​တောစဉ်းစားပုံများကို အရသာမပျက်​ တဆက်​တည်းဖတ်​နိုင်​​စေရန်​
ကျွနု​ပ်​နှင့်​​ပြောဆို​သောစကားများကိုချန်​လှပ်​၍ ​ဖော်​ပြသွားမည်​ဖြစ်​ပါ​ကြောင်း ….
“….. ဒီလို စလိုက်​မယ်​အိုင်​ပီ …. ပထမဆုံး အ​သေချာဆုံးဖြစ်​နိုင်​သူ​တွေကို ​ရွေးထုတ်​ကြည့်​တာ​ပေါ့ …. ။ ဒါမှ မသိကိန်း​တွေ ​လျော့သွားမယ်​မဟုတ်​လား …
ကဲဗျာ … ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်​ကဗျာ Dream ကို စဉ်းစားရင်​ ….?.?
အဲ့ကဗျာကို ကျုပ်​တို့ ကွန်​မန့်​တစ်​ခုမှာ ဖတ်​ခဲ့ဖူးတယ်​ဗျ ။ ​ရေးသူက မဟာမြန်​မာပါပဲ ..။
သဲလွန်​စအ​နေနဲ့လည်း လုံမက ​ပေးထားပါတယ်​​လေ … အဖနိုင်​ငံရဲ့နာမည်​နဲ့တူတဲ့သူ ဆို​တော့ …
သူက​တော့ … အစက်​အ​ပျောက်​မဟုတ်​ဘဲ ဆက်​​ပေးချင်​တဲ့​မော်​ဒန်​ကဗျာဆရာဆို​တော့…. အလင်းဆက်​!!!!!
သူပါပဲ …သူ့ကဗျာကိုရှာရပါလိမ့်​မယ်​ ..
သူက​မော်​ဒန်​သမားပီပီ ခံစားချက်​ပြင်းထန်​ပုံဘဲဗျ ။ သူ​ရေးတတ်​တဲ့စာ​တွေမှာလည်း အယူအဆပြင်းပြင်း ​ရေးတတ်​တယ်​ ..
ဆို​တော့ ..ကျုပ်​တို့က ကဗျာ​တွေထဲက ခတ်​ပြင်းပြင်း ​ရေးထားတဲ့ ကဗျာကို ရှာကြည့်​ရင်​ …..??
​ခေါင်းကိုက်​ ​နေတယ်​ ဆိုတဲ့ ကဗျာနဲ့ လူသားရဲ့အရှုံး ဆိုတဲ့ကဗျာနှစ်​ပုဒ်​ကို​တွေ့ရမယ်​ …
​ကောင်းပြီ …ဒါဆို အဲ့နှစ်​ပုဒ်​ထဲကတစ်​ပုဒ်​ကိုပြန်​​ရွေးတာ​ပေါ့ ….. ဒါ​ပေသိ … ကွန်​မန့်​တစ်​ခုမှာ ​ခေါင်းမကိုက်​ဘူးလို့ဆိုထားတယ်​ဆို​တော့ …ဖြစ်​နိုင်​စွမ်းရှိတာက လူသားရဲ့အရှုံး ပဲဖြစ်​လိမ့်​မယ်​ဗျို့ …..။
​နောက်​တစ်​​ယောက်​က ရွာပြင်​ဇနပုတ်​က မီးမှီန်​မှိန်​နဲ့ ​နေသူလို့ ဆိုထား​တော့ …. ? ဒီအသုံးအနှုံးက ကိုခင်​ခ တစ်​​ယောက်​ဘဲဖြစ်​မယ်​ဗျ ။ သူ့ ပို့စ်​တစ်​ပုဒ်​မှာဖတ်​ခဲ့ဖူးတယ်​​လေဗျာ …….
ဘယ်​ကဗျာ လဲလို့စဉ်းစားရင်​​တော့ …. ကိုခင်​ခ ရဲ့ကဗျာ​တွေ မှာထူးခြားချက်​က tone လို့​ခေါ်မလား ဖလိုး လို့​ပြောရမလား …
တူ​နေတာ​လေး​တွေ​တွေရတယ်​ဗျ ။ ဆို​တော့ …. ကျုပ်​စိတ်​ခံစားမှုအရ မှန်းကြည့်​ရရင်​ ဟုတ်​ရဲ့လား အဖွားရယ်​ ဆိုတာ ကိုခင်​ခ​ရေးတာလို့ ထင်​တာဘဲဗျ …
​နောက်​တစ်​​ယောက်​က​တော့ လွယ်​ပါတယ်​ဗျာ … အ နဲ့စပြီး ဂနဲ့ ဆုံးတဲ့သူ ကိုအာဂ ​ပေါ့ဗျာ … သူ့ကဗျာကို​တော့ ​နောက်​မှစဉ်းစားမယ်​ဗျို့ …
ဒီ ဆိုက်​ထဲမှာ ဓတ်​ပုံရိုက်​ပီး ကဗျာ​ရေးသူက နှစ်​​ယောက်​​တော့ မြင်​ထားတယ်​ ။ ကို​ပေါက်​ နဲ့ ကိုအင်​ဇာဂီပါ …. ကဗျာ​တွေကို ဖတ်​ကြည့်​​တော့ ကို​ပေါက်​လက်​ရာလို့ ထင်​ရတာ မ​တွေ့ဘူးဗျ …. သ​ရော်​ထားတဲ့ကဗျာ​လေးတစ်​ပုတ်​ကို​တော့​တွေ့ရတယ်​​လေဗျာ …. ဒါ့​ကြောင့်​ အင်​ဇာဂီ ပဲဖြစ်​မယ်​လို့ ​ပြောချင်​တယ်​အိုင်​အို​ရေ ….
ကဗျာပြခန်းတာဝန်​ခံတစ်​​ယောက်​နဲ့ နာမည်​ဆင်​တယ်​လို့ ဆိုထားတယ်​​လေဗျာ ။
၅…… သုက​လေး ဆို​တော့ …..
အထက်​က လူ​တွေနဲ့ နာမည်​ဆင်​တာ မှန်းကြည့်​​တော့ …
သူက​လေးနဲ့ ဆင်​တူတဲ့ လူက​လေး ဆိုတာ သတိယမိတယ်​ …
ခင်​ဗျားမှတ်​မိလားဗျ …ခင်​ဗျားက ကိုလူက​လေး လို့​ခေါ်မိလို့ လျှာထုတ်​ပြသွားတာ​လေ …. ဟားဟားဟား …
ရွာလူကြီးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ ပို့စ်​ထဲကမင်းသားက​တော့ တခြားဟုတ်​ရိုးလားအိုင်​အိုရယ်​ …
ဝါနာဘာဂီ ထဲက အံစာတုန်း​ပေါ့ဗျာ …
တစ်​ရွာလုံး အုန်းအုန်းထသွားတာ ခင်​ဗျား​တောင်​မှ အိပ်​ရာက နိုးသွားတယ်​မှတ်​တယ်​ …. ဟင်းဟင်း ဟင်း…….
အံဇာတုန်းက ချစ်​သူမျက်​နှာတစ်​ရွာထင်​ပီး မိုးမမြင်​​လေမမြင်​ဖြစ်​​နေတယ်​ဆို​တော့ …
​ကောင်းကင်​ကြီးပြိုကျလို့ နတ်​သမီးလာကယ်​တာ သူ​ရေးတာများ ထင်​မိတယ်​ဗျို့ ….
ပြခန်း ၆ ကမင်းသားက​တော့ မိုးမင်းသားဖြစ်​မယ်​ထင်​တယ်​အိုင်​အို​ … မိုးမင်းသားရဲ့ကဗျာကို ​လေ့လာကြည့်​​တော့ အများစုက အချစ်​ကဗျာ​တွေဖြစ်​​နေတယ်​ဗျ ။
လူတစ်​​ယောက်​မှာ.ဟက်​ဗစ်​ကျူရယ်​ အက်​ရှင်​​တွေရှိတတတ်​တယ်​ဆိုတာ အိုင်​အိုလည်း သင်​ခဲ့ဖူးမှာပါ ။
အချစ်​ကဗျာ ၃ ပုတ်​မှာ ကြွားခြင်းကို ကိုအံစာတုန်းလို့ ယူဆရင်​ ကိုယ့်​အလှည့်​ကျ​တော့ နဲ့၊ ​နှောင်​ဖွဲ့ခြင်းဆိုတာဘဲကျန်​မယ်​ …
ကျုပ်​က​တော့ ဒီလိုစဉ်းစားတယ်​အိုင်​အို​ရေ…. အထက်​က ကဗျာနှစ်​ပုဒ်​လုံးကို မိုးမင်းသားကဗျာ​တွေနဲ့ ယှဉ်​ဖတ်​လို့တဲ့အခါမှာ …
ကိုယ်​အလှည့်​ကျ​တော့ဆိုတဲ့ကဗျာမှာ သူ့ရဲ့ ဟက်​ဗစ်​ကျူရယ်​အက်​ရှင်​​တွေကို​တွေ့လိုက်​ရတယ်​ဗျို့ ….
ဆို​တော့ မိုးမင်းသားဟာ ကိုယ့်​အလှည့်​ကျ​တော့ဆိုတဲ့ ကဗျာကို​ရေးတယ်​ဆိုတာ ​မြေကြီးလက်​ခတ်​မလွဲ ​ဘူး အိုအိုကြီး​ရေ ……
It is difficult = ခက်​သည်​ >>>>> ခက်​သီ …..
သူက ခံစားမှုပြင်းပြင်း​ရေးတတ်​သူပဲဗျ အိုင်​အို​ရေ ..
သူ့ အ​ကြောင်း ​နောက်​မှ​ပြောမယ်​ဗျာ …
နိုကီရာ …… မဖြစ်​နိုင်​
အဲ့ပဲ …… မဖြစ်​နိုင်​
ဆိုနီ …… ​သေခြာ​ပေါက်​ ဖြစ်​နိုင်​တယ်​
ဆိုနီ ဆိုတာ မြင်​ဖူးတယ်​မှတ်​တာပဲ အိုင်​အို​ရေ …
အလို .. !!! ​နေ့လည်​ထမင်းစားချိန်​​တောင်​ ​ရောက်​​နေပါလား အိုင်​အိုကြီး​ရေ …
လာဗျာ .. ​ရွှေမြို့​တော်​ ချစ်​တီးထမင်းဆိုင်​မှာ ဖိုက်​တင်​​ဘော ချက်​ထားတာ​တော်​​တော်​​ကောင်းတယ်​မှတ်​တာပဲ …
စားပြီးမှ ဆက်​​ပြောတာ​ပေါ့ဗျာ …
ဤသိုဖြင့်​ ….. ကျွနု​ပ်​နှင့်​ မိတ်​​ဆွေကြီးကိုမြင့်​​ကျော်​တို့သည်​ ပဒုမ္မာအားကစားကွင်း​ဘေးတွင်​ဖွင့်​လှစ်​ထား​သော ​ရွှေမြို့​တော်​ချစ်​တီး ထမင်းဆိုသို့ ထွက်​လာခဲ့​လေ​တော့သည်​ ။
မှတ်​ချက်​ ။ ။ မိတ်​​ဆွေကြီး ကိုမြင့်​​ကျော်​မှာ ကျန်​ရှိ​နေ​သောကဗျာဆရာနှင့်​ ကဗျာများကို ဆက်​လက်​​ဖော်​ထုတ်​ခဲ့ပါသည်​ ။
သို့​သော်​ ….. မိတ်​​ဆွေကြီးမဟာမြန်​မာ မှလည်း ဆက်​လက်​​ရေးသားဦးမည်​ဖြစ်​သဖြင့်​ ဤစာမူတွင်​ ဆက်​လက်​မ​ဖော်​ပြ​တော့ပဲ ချန်​လှပ်​​ပေးခဲ့ပါသည်​ ။
ကဗျာပြခန်းမှ တာဝန်​ရှိသူများ လာ​ရောက်​စီစစ်​​ပေးပါခင်​ဗျား ….
နာမည်တွေက အကုန်နီးပါး မှန်သလောက်ပါပဲ။
ကဗျာနဲ့ ကဗျာရှင် တွဲတာ မှားနေသေးတယ်။
အယူအဆတွေ ခပ်ပြင်းပြင်းရေးတတ်တဲ့ မော်ဒန်သမားးးး
ဗိုလ်အောင်ဒင် လေသံနဲ့ပဲ ပြောပါ့မယ်
ဟဲဟဲ ဒါကတော့ ပုလိပ်ဘက်က အမြင်ကိုးးကိုဘချစ်ရဲ့
တွေးတတ်လိုက်တာ။ သများဒို့မြန်းတခါမွှတသောင်းရဘူး။ ကဗျာအဖွဲ့သများကိုကြိုပေးထားပါလားဟင်။ တခါမဟုတ်တခါတော့မှန်မှာပေါ့။ အာဟိ
ရွာအပြင်ဇနပုဒ်တဲလေးမှာ ဆီမီးမှိန်မှိန်နဲ့ နေတာ ခင်ခ တဲ့လားဗျ
နည်းနည်း ပို တိတိကျကျ ဆန်းစစ်ရရင်
ကဗျာဆရာ စုစုပေါင်း ဆယ့်တစ်ဦးမှာ
ရှစ်ဦး မှန်နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျ။
ကဗျာနဲ့ ကဗျာဆရာ အတွဲအစပ်မှာတော့
နည်းနည်းအလွဲအချော်လေးတွေ ဖြစ်နေတာကိုလည်း မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျ။
ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဆက်လက် ချီတက်လာမယ် ဆိုတာကိုလည်း
အိုင်ပီ လူ ကိုမြင့်ကျော် က ဥာဏ်သမား ပဲ ဗျ..
ကျုပ်တောင် လူ နာမည် မနည်း ဖေါ်နေရချန် မှာ
လူ ကော ကဗျာ ကော တွဲစပ် ပေး နိုင်တာ ချီးကျူး ပါတယ်..
ဒါပေမယ့်… ဒါပေမယ့် ပေါ့ဗျာ.. ပဟေဠိ ရဲ့ အလိုတော် က
ကဗျာ ဆရာ အမည် သာ လျှင် ဖြစ် သမို့ ..
ကျုပ်တော့ ..တတ်စွမ်း သမျှ အမည်တွေ ဖေါ်ထုတ် လိုက် ပါရဲ့..
အော် .ဒါ နဲ့ ..ကျုပ် အဖြေ တွေ က ..စနေ ကတည်း က ထွက် နေတာ
ဆို ပေမယ့် တူ နေတာ တွေ ရှိခဲ့ ရင် ဥာဏ် ရည်တူ လို့ မှန် နေတယ် လို့
သဘော ထား ပေး ပါဗျာ…
ရုံးပိတ် ရက် ဆို အင်တာ နက် ချိတ် မရနိုင် လို့ မန်းဒေး မှာ တင်ရတာ နောက် ကျသွား ပါတယ်…
အဖြေ တူ မှန် ရင် တောင်..ကဗျာ အမည် ဖေါ်ကောင် လုပ်သမို့..အိုင်ပီ ရဲ့ လူ ကိုမြင့်ကျော် က
ကျုပ် ထက် ဥာဏ်ရည် သာကြောင်း ပါ ခင်ဗျာ…
လူစွန့်စား ကိုမြင့်ကျော် စဉ်းစားပုံ သဘောကျသဗျို့
(၈) ယောက်မှန်တယ်… ကဗျာနဲ့ကဗျာဆရာ တွဲပေးထားတာလည်း အတော်မှန်တယ်..
ခိ..အနော်လည်း သဂျီးကို မွဲဆေးဖော်တဲ့အနေနဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်ပြီး အဖြေပြောပါမယ်…
​ကေဇီ ၊ အလင်းဆက်​ ၊ ကိုခင်​ခ၊ကိုမာဃ ၊ကိုမဟာ ၊ ကိုကြီးမိုက်​ ၊ TNA တို့အား ​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါတယ်​ခင်​ဗျာ ။
အ​ပျော်​သ​ဘော စကားထာဖွက်​ရင်း … ​ပြောမှားဆိုမှာရှိရင်​လည်း ခွငမ့လွှတ်​ပါခင်​ဗျ ။
​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ​ဒေါ်ကြီးလုံ ..
ပြခန်း ၉မှာ နာ က ဘာရေးထားတာလဲဆိုတော့